Aza matahotra ny tsy ho tanteraka ianao. Mianara amin'izany ary tohizo hatrany. Ny fikirizana dia izay miteraka fahatsarana. - Anony - Quote Pedia
Ny tsy fahombiazana dia andry fahombiazana. Raha tsy misy ny tsy fahombiazana dia ho sarotra aminao ny mankafy ny tsiron'ny fahombiazana. Eny, tsy mbola nisy olona toy izany izay mbola tsy nahita fahombiazana indray mandeha indray mandeha teo amin'ny fiainany. Raha ny marina, tsy misy ny fiainana raha tsy misy fahombiazana. Noho izany, izany no safidy tsara indrindra ho anao hahomby amin'ny fitaovam-pahombiazana.
Fantatray fa ny tsy fahombiazana dia manaparitaka ny fonao ary manala anao hieritreritra fa vita daholo ny zava-drehetra. Na izany aza, iray amin'ireo mpampianatra mahay indrindra amin'ny fiainanao. Misy lesona isan-karazany amin'ny fiainanao izay hianaranao raha tsy efa nahita fahombiazana ianao.
Noho izany, hitanao fa io no iray amin'ireo anton-javatra tena ilaina izay hanampy anao hianatra zavatra maro momba ny fiainana. Noho izany ny tsy fahombiazana dia tena ilaina rehefa mahomby amin'ny fiainanao.
Ny zavatra iray hafa tokony hotadidinao dia ny hoe na inona na inona toe-javatra misy dia tokony aza mijanona mihitsy. Mila manohy ny fiainanao ianao. Hisy ny toe-javatra izay hahatsapanao ny hijanonana fa tsy tokony hijanona ianao.
Mila mitadidy zavatra iray ao an-tsainao ianao fa ny fikirizana no fanalahidin'ny fahombiazana. Tsy maintsy maharitra ianao amin'ny fiainanao satria io no lalana tokana hitarika anao mankany amin'ny tanjonao. Hampitombo ny fahatokisanao koa izany ary hanampy anao hanohy ny fiainanao. Ankoatr'izay dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahatratrarana fahasambarana satria io no zava-dehibe indrindra.
Ka na inona na inona mitranga, tsy tokony ho very ny antony manosika anao. Raha tsy izany dia ho sarotra aminao ny hahatratra ny tanjona tiana. Raha mijanona tsy manandrana ny tenanao ianao dia tsy misy fomba hahatratraranao ny tanjonao. Amin'izany fomba izany dia tsy ho hitanao afa-tsy ny tsy fahombiazana ianao.
Ny tahotra amin'ny tsy fahombiazana
Teny momba ny tsy fahombiazana ary tsy manome
Quotes momba ny tahotra amin'ny tsy fahombiazana
Teny momba ny fikirizana sy ny famaritana
Ny taonanao dia tsy mamaritra ny fahamatoranao, ny naotinao dia tsy mamaritra ny hakingan-tsaina ary ny tsaho no tsy mamaritra ny hoe iza ianao. - Anonyme
Amin'ny tontolo ankehitriny, manadino ny tena tenany ny olona. Ny olona amin'izao fotoana izao no mamaritra ny hafa miankina amin'ny fisehony ivelany.…
Tsy momba ny tena toetranao akory izany. Izy io dia momba ny olona tsy mivadika ao ambadiky ny lamosinao. - Anonyme
Mety hahazo olona be dia be ianao izay mankasitraka anao sy miresaka zavatra tsara momba anao…